Raw DMAA powder (13803-74-2) Vaiti - Phcoker Chemical
Raw 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2)
Raw 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder is .......
Unyanzvi: 12400kg / mwedzi
SKU: 13803-74-2 Category: Kuonda
Raw 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2) video
Raw 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2) Tsanangudzo
Product Name Raw 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder
Kemikari Name 4-methylhexan-2-amine, DMAA, Dimethylamylamine, 1, 3-DMAA, Geranamine, Methylhexaneamine, 3-Dimethylpentylamine, Forthane
muchiso Name Forthane, Geranamine
Molecular Wsere 151.67752
Kunyorera Point 120-130 ° C
Biological Half-Life DMAA ine hafu yehupenyu hwemaawa e8.4 inofananidzwa nemaawa e5.4 chete ecaffeine, uye nguva yakasara yamaawa 0.14 vs maawa 0.37 nokuda kwea caffeine.
Skukodzera Mumvura, 1.5X10 + 4 mg / L pa 25 deg C (iri)
APane Sezvokudya zvinokurudzira kana simba-kukurudzira
mbishi 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2) Tsanangudzo
1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) poda is derived amphetamine yakave yakatengeswa mumitambo yekuita uye kuora kwezvinhu zvinorema, mazhinji ayo anotengeswa sezvokudya zvinowedzera. Sezvo inonyanya kushandiswa kwenheyo yenyika (CNS) inokurudzira, DMAA inowedzera mazinga emagetsi akafanana neaya e caffeine, asi anoshandisa tad zvakasiyana. Kunyange zvazvo nzira chaiyo iyo DMAA inowedzera simba kwete 100% zvimwe, vazhinji vanotsvakurudza vanobvumirana kuti DMAA inokurudzira noradrenaline (norepinephrine) kusunungurwa muuropi.
1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) inozivikanwawo semethylhexanamine kana kuti geranium extract, zvisinei, FDA haina kuziva chero svesa inotendeseka inoratidza kuti DMAA iripo zvakasikwa mumiti. Kunyange zvazvo DMAA panguva imwe yakagamuchirwa sechirwere chekudzikisa kushaya muviri, hachibvumirwi kushandiswa uku uye hapana kushandisa kwekurapa kweDMAA powder inozivikanwa nhasi. DMAA, kunyanya pamwe chete nezvimwe zvinokonzera zvinokonzera se caffeine, inogona kuva nengozi yehutano kune vatengi. Kutora DMAA powder kunogona kukonzera ropa uye kunotungamirira kumatambudziko emwoyo kubva pakuderera kwekufema uye kusimbisa mubhokisi kusvika pamwoyo kurwisa.
1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2) Mushonga Wekuita
Physiology zvidzidzo zveDMAA powder muZ1940s uye 1950s zvakaratidza zviratidzo zvayo zvemuviri zvinoshandiswa zvinofananidzira chiito che epinephrine pamwe nechemberi nenyasha inonzwika nehutano hwemagetsi. Izvi zvinosanganisira kuwedzerwa kweropa rinokonzerwa nekugadziriswa kwemitsipa yeropa remhepo, kuwedzerwa kwepfungwa yemwoyo nekuda kwekusimudzira mwoyo nekuwedzera shuga yeropa.
Vasoconstriction - mishonga yeropa mumhino inogona kudzivirira kuitira kuti kuderera ropa kuderera kunotungamirira kumusana muduku. Iyi ndiyo nzira inoshandiswa nevakawanda veOTC nasal sprays seye oxymetazoline (Afrin) uye zvechokwadi inoshanda chaizvo. Zvisinei, Forthane akazobviswa pamusika nekuda kwematambudziko makuru anosanganisira misoro, kutengesa, uye kuwedzerwa kweropa. Izvi zvinogona kunge zvichiitika nokuti DMAA inoratidzika yakafanana neamphetamine uye somugumisiro, boka racho harisi kungova vasoconstricting agent asiwo inonyanya kushungurudza chirwere (CNS) chinosimudzira.
Benefits ye1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2)
DMAA inobatsira kuvandudza kurangarira kwenguva pfupi nekuita kwakasimba
DMAA inobatsira kupisa mafuta
DMAA inosimudzira simba
DMAA inogona kuvandudza kushanda mumuviri
DMAA inowedzera pfungwa uye kuwedzera kwekutarisa
DMAA inovandudza mafungiro uye mafungiro akazara emufaro
DMAA inovandudza mano ekuziva
DMAA inowedzera simba, yakawedzerwa kuisa pfungwa uye kukurudzira
varumbidzwa 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2)
Nhamba yakakurudzirwa ye1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) iri mumutambo we 10-20mg uye pakupedzisira inosvika kusvika ku 40-60mg pazuva, hapana humwe uchapupu huripo hunotsigira huwandu hwemadhora asi hunoratidzika kunge huwandu hwemasero for supplemental1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) pamusika. Kune dzimwe nzira dzokushandisa:
25mg pamwe 25mg 30min mushure mekutanga kweroti
50mg isina mudumbu
50mg DMAA poda yakasvibiswa pamwe neKeji yeKafesi isina chinhu mudumbu.
Paunoshandisa nzira yekutanga neyechipiri, iwe unganzwa uchinzwa shanduko nokuti zvishoma ndezvako.
Paunoshandisa nzira yechitatu uye yechina, DMAA powder ichakupa pfungwa huru nekufungisisa nekusimudzira manzwiro ako. Manzwiro ako achava mazhinji. Zvechokwadi, nzira yechina inogona kunge iri nani nokuti ichava yakakosha.
Imwe nzira ndeyokutora 25mg yeDMAA powder maawa maviri mushure mokutora 50mg. Izvozvo zvichava nzira yakaipa, zvichaita kuti unzwe uchinetseka uye uwane misoro duku. Vamwe vashandisi vane ruzivo vanoti DMAA dose haifaniri kudarika 75mg munguva ye 24, uye zvakanakisisa kuti tisatora 75mg nezuva rimwe.
Zvikanganiso ye1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2)
1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder inogona kunge isina ngozi kana inotorwa nemuromo. Sezvo inofungidzirwa kuti inoshanda seinovhiringidza, pane kunetseka kuti inogona kuwedzera mukana wematambudziko makuru akadai se:
Bongo rinopa ropa
Nhamo ye mwoyo uye kuwedzerwa kweropa
Bata nemishonga zvisina kunaka.
Kukanganiswa kwemoyo (mwoyo arrhythmia)
Synephrine inowanzovapo mumiti yemicrorus kubva kumhuri yeRutaceae, inonzi sympathomimetic alkaloid. Synephrine ane zvitatu zvakasiyana ......
Unyanzvi: 1370kg / mwedzi